KOOXDA QAXOOTIGA: Yusra waa gabar silac soo martay balse haatan ku dhaqaaqaysa tillaabo taariikhda geli doonta! – Gool FM
KOOXDA QAXOOTIGA: Yusra waa gabar silac soo martay balse haatan ku dhaqaaqaysa tillaabo taariikhda geli doonta!
(Lousane) 31 Luulyo 2016 – Yusra Mardini waxay ka mid ahayd dad yar oo dabaalan karey kana badbaadey markii ay inay quusto bilowdey dooni ay ka buuxeen dad maxas ah oo kasoo tacaburay dalka Suuriya.
Waxay Yusra ku booddey biyaha iyadoo 3 saacadood dabaalanaysey ilaa ay ka aragto xeebaha dalkaasi Giriigga, 2 sanadood uun kaddib, Yusra waxay ka qaybgeli doontaa dabaal, balse markan ma aha mid ay nafteeda ku badbaadinayso ee waa mid ay billad ugu tartamayso ciyaaraha Olombikada, iyadoo aan lkn dalna metelaynin, balse ka tirsan kooxdii ugu horreeysey adduunka ee ay qaxootigu leeyihiin.
Toban maalmood gudohood, 10 qof oo cajiib ah – oo ka kala socda qaxootiga adduunka min Syria ilaa South Sudan – ayaa Olombikada ku meteli doona kooxdii ugu horreeysey taariikhda ee aan dalna ka soconin.
Ma laha, calan, astaan calan iyo qaran ay shafka u garaacaanthey have no flag, no national anthem, waxaana kooxdan iskusoo dubba riddey hay’adda QM qaxootiga ugu qaybsan, si ay dadkan kasoo badbaadey dhibaatooyinka ay si wanaagsan u garanayaan Soomaali badani ay u helaan fursad ay insaaniyadda ku xusaan.
Dadka qaar baa qaba inay tani noqon doonto fursad lagu heli karo koox u ciyaarta bini aadminimada, sidaa darteed waxaa ciyaartan taageeri doona 30 milyan oo carruur ah oo qaxooti ku ah daafaha caalamka, kuwaasoo qaab toos ah (live-streaming) u daawan doonta tartankan iyagoo ku jira xeryaha qaxootiga, waxaana dabcan carruurtaasi ku jira kuwa Soomaaliyeed.
Ciyaaraha Olombikada kulaalaha ayaa Rio de Janeiro ka bilaabmi doona 5-ta Agoosto iyagoo xirmi doona 21-ka Agoosto, waxayna Gool FM ballan qaadaysaa in haddii ALLE idmo ay soo duwayso guud ahaan, gaar ahaan kuwa kooxda qaxootiga u tartamaysa.
3 GABDHOOD OO KA MID AH KOOXDA OLOMBIKADA EE QAXOOTIGA
Yursra Mardini — 17-jir Suuriyaan ah, taasoo iyada oo ay walaasheed wehliso, ka booddey doonideeda oo ka timi Turkey una socotey Giriigga iyadoo ay wehliyaan 20 kalena si naf la caari ah ku gaartey gasiiradda Lesbos ee dalka Giriigga. Waxay hadda ku nooshahay Jarmanka.
Raheleh Asemani — Waxay ciyaartaa taekwondo-ga, waa dagaalyahanad kasoo baxsatay Iiraan waxayna iminka boostaale ka tahay dalkaasi Belgium.
Yolande Mabika — Waxay dheeshaa Judo-ga, iyadoo u dhalatay dalka Democratic Republic of Congo waxayna wadankeeda kasoo carartay 3 sanadood kahor, haatanna waxay ku nooshahay Brazil.
Madaxwayaha Olombikada Adduunka ee Thomas Bach ayaa isagoo la hadlaya Wakaaladda Waraka Faransiiska ee AFP (Agence France-Presse) wuxuu arrintan ka yiri:
”Waxaa gebigeen na taabtay culayska ay leedahay xasaraddan qaxootigu, inaannu kooxdan soo dhoweynaha waxaannu ku diraynaa farriin rajo gelinaysa dhamaanba qaxootiga caalamka.”
GOOGOOSKA: Inter Milan vs Bayern Munchen 1-4
GOOGOOSKA: Liverpool FC vs AC Milan 2-0 (Milan oo laba mir lagu mija xaabiyey)